Author Topic: Asc (Read 8774 times)
Abdinasir Abdulahi Hashi
« on: May 12, 2011, 12:21:28 AM »
Dhamaan Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha websideka iyo memberska webka waxaan dhaamntiin idinku salaamay 114 Quranka kariimka ah
Magacaygu waa Abdinasir Abdullahi Hashi , da daydu waa 22 ama 23 , waxaan ku noolahay wadanka Sweden . waxaan ka mid ahay dadka la nool cudurada maskaxda. hadana waxaa ii socda daawooyinkii ku haboonaa cuduradayda
waxaan la soo noolaa mudo aad iyo aad u badan oo aan hada halkaan ku soo koobi karin siday noloshaasi u ekayd iyo sida aan hada dareemayo
waxaana aad iyo aad u adag sida ay ku fahmaan dadka aan qabin dhibkaan...... inkastoo aysan dadka bini aadmiga ah aysan isku si wax u wada fahmin oo ay jiraan dad badan oo fami kara inay dhici karaan in cudura maskaxda ku dhacaa yihiin wax jira walow aysan wax kale ka sii fami karin.
waxaa wadankayga somalia ka jira dhibaatooyin aad iyo aad u badan oo ay ugu horayso dhibaatooyin ka dhex dhasha bulshada iyo habdhaqankeeda iyo sida ay maskaxda qofka u korinayaan tusaale ahaan maskaxdu waa sida matoorka baabuurka saaran oo kale hadii baabuurka la wado mudo dhaafsiisan xadkii loogu tala galay khasab matoorku wuu kululaanayaa ka dibna waxaa dhacaysa in gaarigaas u ka gaabiyo shaqadii uu horay u qaban jiray. sababtoo ah hadii gaarigaas aan la dayac tirin oo aan saliida iyo kululaysada aan laga badalin ama aan la qaboojin wuxuu halis ugu jiraa in uu fariisto oo uusan shaqo wanaagsan qaban...waxaynu ka hadlaynay waa baabuur wuxuuna ka samaysan yahay bir... maxaad u malaysaa inay ka samaysantahay qofka bini aadmiga ah maskaxdiisu waan wada garankarnaa uma baahna inaan ka hadalno waxa ay ka samaysantahay qiimaha ay leedahayna waan wada ognahay inay baabuur iyo wax la mid ah aysan u dhigmin.
« Reply #1 on: May 26, 2011, 07:27:32 PM »
warbixinta oo halkan aad ka akhrisan kartaan, ayaa waxaa ka muuqda dad maskaxda ka xanuunsan oo lagu xiray silsilado weyn oo dhagax weyn lagu sii xiray sidii dad dambi galay oo maxaabiis oo kale ah.